बच्चाहरूमा हात, खाना र मुख रोग: अभिभावकको गाईड - स्वास्थ्य शिक्षा | सेप्टेम्बर 2021
स्वास्थ्य शिक्षा, समाचार कम्पनी कम्पनी, समाचार स्वास्थ्य औषधि जानकारी, स्वास्थ्य शिक्षा चेकआउट कम्पनी, स्वास्थ्य शिक्षा खेलहरु औषधि बनाम मित्र औषधि जानकारी, समाचार स्वास्थ्य शिक्षा, घरपालुवा जनावर समाचार, कल्याण भारी खेल औषधि जानकारी प्रेस
मुख्य >> स्वास्थ्य शिक्षा >> बच्चामा हात, खुट्टा, र मुख रोगको लागि अभिभावकको गाईड
HFMD के हो? | लक्षण | निदान | उपचार | रोकथाम
हात, खुट्टा, र मुख रोग लाग्ने चीज जस्तो लाग्छ तपाइँ एक गार्डेनमा फेला पार्नुहुन्छ, तर यो वास्तवमा एक सामान्य र सामान्यतया हानिरहित बचपनको बिमारी हो। यो संक्रामक हो र सजीलै सजिलैसँग फैलिन्छ विद्यालयहरु र बाल हेरचाह केन्द्रहरू। धन्यबाद, धेरै जसो केसहरू हल्का हुन्छन् र बच्चाहरू कुनै गम्भीर वा स्थायी प्रभावहरू बिना पुनः प्राप्त हुन्छन्।
हात, खुट्टा र मुख रोग (HFMD) के हो?
HFMD एक भाइरल बिमारी हो (सामान्यतया कोक्ससाकिरस a16 वा अन्य enterovirus)। संयुक्त राज्य मा, यो अक्सर मा अक्सर हुन्छ गर्मी र पतन .तुहरू। जबकि वयस्कहरू र ठूला बच्चाहरूले भाइरल संक्रमणलाई समात्न सक्छन्, यो प्रायः children महिना देखि years वर्ष उमेरका बच्चाहरूमा हुन्छ। यो कुनै पनि पशु रोगसँग सम्बन्धित छैन - खुट्टा र मुख रोगको नाममा समानता हुँदाहुँदै पनि (खुर र मुख रोग पनि भनिन्छ), जसले गाई, भेडा र सुँगुरहरूलाई असर गर्दछ।
एचएफएमडीको विशेषता रातो फ्ल्याट दाग हो जुन मुखमा, हातको हत्केलामा र खुट्टाको खुट्टाहरूमा, र कहिले काँही शरीरको अन्य भागहरूमा छाला हुन्छ।
को इन्कुबेसन समय (रोगको जोखिमदेखि लक्षणको उपस्थिति सम्मको समय) HFMD को लागी तीन देखि छ दिन छ। मान्छे हो धेरै संक्रामक रोगको पहिलो हप्ताको अवधिमा, तर भाइरस श्वासप्रश्वासको पथमा रहन सक्छ र एक व्यक्ति स्वस्थ पछि केही हप्तासम्म बगाउन सक्छ, र HFMD मलको माध्यमबाट धेरै महिनासम्म फैलिन सक्छ। विशेष गरी वयस्कहरूको लागि HFMD हुन सक्छ र लक्षणात्मक हुन पनि सम्भव छ। HFMD को Asymptomatic वाहक अझै पनि रोग फैलिन सक्छ।
किनकि रोग सामान्यतया हल्का हुन्छ, र संक्रामक अवधि लामो हुन सक्छ, बच्चाहरूलाई घरबाट बस्न आवश्यक पर्दैन स्कूल वा डेकेयर, बाहेक:
तिनीहरूलाई ज्वरो आएको छ।
तिनीहरू भाग लिन अस्वस्थ महसुस गर्छन्।
स्कूल वा डेकेयरमा एक नीति रहेको छ जसमा HFMD भएका बच्चाहरूलाई घर बस्न आवश्यक पर्दछ।
तिनीहरूको खुल्ला छाला हुन्छ। (छाला भित्रको तरल पदार्थ संक्रामक छ। छाला सुक्नको लागि करिब एक हप्ता लाग्छ।)
तिनीहरूको स्वास्थ्य सेवा प्रदायकहरूले उनीहरू घरमा बस्न सल्लाह दिन्छन्।
हात, खुट्टा र मुखका लक्षणहरू
HFMD चिसो जस्तै लक्षणहरुबाट शुरू हुन्छ जस्तै ज्वरो, घाँटी दुखाइ, र नाक वाहक। त्यसो भए हात र / वा खुट्टाहरूमा छालाहरू देखा पर्दछ र (सामान्यतया अल्सर) मुखमा।
संयुक्त राज्य केन्द्र रोग नियन्त्रण र रोकथाम (CDC) का अनुसार हात, खुट्टा र मुख रोगका लक्षणहरू:
फ्ल्याट रातो दागहरू (पेन्सिल इरेजरको आकार वा सानोको बारेमा) जुन हात, खुट्टा र कहिलेकाँ ढुocks्गा, घुँडा, कुहिनो र / वा जननेन्द्रियमा दाग। पुराना दागहरूमा फ्ल्याट हुने सपाट रातो दागहरू हुन्छन्।
मुखमा पीडादायी घाउहरू जुन सपाट रातो दागहरूबाट शुरू हुन्छ
तपाईंको बच्चाका लक्षणहरू सबै एकै समयमा हुन सक्दैन। HFMD का प्राय जसो केसहरू हल्का छन् र माथिको बान्कीका लक्षणहरू पछ्याउँछन् - तर नयाँ कोक्ससाकी भाइरसको कारण HFMD को अधिक गम्भीर रूप २०१२ मा देखिन थाल्यो र प्रसारित हुन जारी रह्यो।
गम्भीर HFMD का लक्षणहरू HFMD जस्तै हुन्, तर समावेश पनि गर्न सक्दछ:
हतियार, खुट्टा, र अनुहारमा धेरै साना छालाहरूले बनेको पुरानो दाग।
औंलाहरू र / वा औंलाको नखाहरू। यो गम्भीर मामिलाको%% मा हुन्छ, रोगमा तीन देखि छ हप्ता। तिनीहरू पछाडि बढ्नेछन् (औंला नखाहरूका लागि to देखि months महिनामा र औंलाहरूका लागि नौदेखि १२ महिनामा) र तिनीहरूले सामान्य हुँदा देख्नेछन्।
यो औंलाहरु र औंलाहरु मा छाला को लागी एक हप्ता वा दुई HFMD मा छील गर्न को लागी सामान्य छ। यो हानिरहित हो र मॉइस्चराइजिंग क्रीम प्रयोग गरेर मद्दत गर्न सकिन्छ।
HFMD बाट गम्भीर जटिलता दुर्लभ छ, तर समावेश गर्न सक्दछ:
भाइरल मेनिन्जाइटिस (मेरुदण्ड र मस्तिष्कको अस्तरको सूजन, जसले अस्पताललाई केही दिन बस्न सक्छ)
एन्सेफलाइटिस (मस्तिष्कको सूजन, विरलै हुने गर्छ)
हात, खुट्टा र मुख कसरी निदान गरिन्छ?
हात, खुट्टा र मुख रोग सामान्यतया क्लिनिक नैदान गरिन्छ, भन्छन् सोमा मण्डल , एमडी, समिट मेडिकल ग्रुपमा एक बोर्ड प्रमाणित इंटर्निस्ट। मौखिक घावहरू र / वा हात वा खुट्टामा घावहरूको एक विशिष्ट उपस्थिति र स्थान छ। जब निदान अनिश्चित हुन्छ, घाँटी swab, मल नमूना, वा पुरानो द्राव परीक्षणको लागि पठाउन सकिन्छ। यद्यपि, परीक्षण विरलै गरिन्छ किनभने यो महँगो हुन सक्छ र लक्षणहरूको व्यवस्थापन परिवर्तन हुँदैन किनकि त्यहाँ कुनै उपचार छैन।
HFMD सामान्यतया बाल रोग विशेषज्ञ वा परिवार / सामान्य स्वास्थ्य सेवा प्रदायक द्वारा पत्ता लगाउँछ। बच्चाहरूले उनीहरूको स्वास्थ्य सेवा प्रदायकलाई डायग्नोस्टिक उद्देश्यहरूको लागि हेर्नुपर्दछ, तर प्रायः जसो स्वास्थ्य सेवा प्रदायकले चिकित्सा उपचार लिने गर्दैन।
तपाईंको स्वास्थ्य सेवा प्रदायकलाई कल गर्नुहोस् यदि लक्षणहरू एक हप्ता भित्र सुधार भएन भने, बच्चासँग कमजोर प्रतिरक्षा प्रणाली छ, वा months महिना भन्दा कम उमेरको हो, एक मेडिकल योगदानकर्ता एमडी लेन पोष्टन भन्छन्। आइकन स्वास्थ्य ।
यदि तत्काल चिकित्सा उपचार प्राप्त गर्नुहोस्:
तपाईंको बच्चा डिहाइड्रेटेड हुन्छ। डिहाइड्रेशनको स्केतले आठ घण्टा वा सोभन्दा बढीमा कुनै पिसाब, गाढा पेशाब, धेरै सुक्खा मुख, कुनै आँसु समावेश गर्दैन। डिहाइड्रेशन HFMD को साथ एक चिन्ताको विषय हो किनभने बच्चाको दुखाइको मुखले सामान्य खाने र पिउने बानीहरूलाई निरुत्साहित गर्न सक्छ।
तपाईलाई लाग्छ तपाईको बच्चालाई तत्काल मेडिकल हेरचाह आवश्यक छ।
तपाईंको बच्चाको स्वास्थ्य सेवा प्रदायकसँग कुरा गर्नुहोस् यदि:
तपाईंको बच्चा months महिना भन्दा कम उमेरको छ।
तपाईंको बच्चा खोप वा खोपमा ढिलाइ भएको छैन - दूषित हुनबाट बचाउन सावधानी अपनाउन पहिले अफिस कल गर्न नबिर्सनुहोस्।
पुराना हतियार र / वा खुट्टामा फैलिन्छ।
फोहर देखा पर्दछ।
ज्वरो तीन दिन भन्दा लामो हुन्छ।
१० दिन पछि कुनै सुधार आएको छैन।
तपाईंको बच्चालाई दीर्घकालीन रोग छ वा प्रतिरक्षा सम्झौता भएको छ।
तपाईलाई लाग्छ कि बच्चा अवश्य देखिनु पर्छ, तर तुरून्त होइन।
औंला नखाहरू वा खुट्टाको टुक्रा खस्छन्।
तपाईंसँग प्रश्न वा सरोकारहरू छन्।
हात, खुट्टा, र मुख उपचार
डा। पोष्टन भन्छन्, त्यहाँ कुनै औषधि छैन कि बीमारी को पाठ्यक्रम छोटो छ वा यसलाई दूर बनाउँछ। एन्टिबायोटिकले मात्र मद्दत गर्दछ यदि त्यहाँ एक माध्यमिक ब्याक्टेरिया संक्रमण छ। जबकि, केहि over-the-काउन्टर औषधीहरूले लक्षण राहत प्रदान गर्न सक्छ।
ज्वरो र दुखाइ राहत
ज्वरो र पीडालाई उपचारको लागि काउन्टर-काउन्टर औषधी जस्ता गर्न सकिन्छ एसिटामिनोफेन ( Tylenol ) वा आइबुप्रोफेन ( सल्लाह वा मोट्रिन )।
मुख दुख्ने राहत
केही बाल रोग विशेषज्ञहरूले यसको संयोजनको सुझाव दिन्छन् बेनाड्रिल र मालोक्स डाक्टर पोष्टनले भनेका छन् तपाईको बाल रोग विशेषज्ञलाई कल गर्नुहोस् कि तपाईको बच्चाको लागी यो सुरक्षित र प्रभावकारी छन।
लिक्विड एन्ट्यासिड, जस्तै मालोक्स वा मायलान्टा , दिनको चार पटक सम्म उपचारको रूपमा प्रयोग गर्न सकिन्छ आवश्यकता अनुसार, र उमेर अनुसार प्रशासित। १ देखि years बर्ष उमेरका बच्चाहरूको लागि, मुखमा केही थोपाहरू राख्नुहोस् वा कपासको स्वाबको साथ सीधा मुख घावहरूमा लागू गर्नुहोस्। Years बर्ष भन्दा माथिका बच्चाहरुका लागि माउल्वस वा माउलान्टाको एक चम्मच (m मिलि) दिनुहोस्। सम्भव भएसम्म बच्चालाई अल्सरमा राख्न लगाउनुहोस् तब थुक्नुहोस् वा निल्नुहोस्। नियमित माउथवाश प्रयोग नगर्नुहोस् यो धेरै पीडादायी हुनेछ।
इरेक्टाइल डिसफंक्शन को लागी कुन भिटामिन लिने?
हात, खुट्टा र मुखको रोग प्रायः एक हप्तामा आफैंमा जान्छ, डा। मण्डल भन्छन्। मौखिक घावहरूले खाने र पिउन गाह्रो बनाउन सक्छ, त्यसैले चिसो खानाहरू जस्तै पपसिलहरू वा आइसक्रिम, पुडिंग वा जिलेटिन निल्न सजिलो हुन्छ। ठोस खानाहरूमा हाइड्रेसनको लागि अप्ट गर्नुहोस्, वा नरम फूडहरू को रूपमा प्रयोग गर्नुहोस् जस्तो कि आलु वा सूप। कुनै पनि नुन वा मसलादार भाँडाबाट टाढा रहनुहोस्, जसले मुख घावलाई चर्काउन सक्छ। बोतलमा पोषित बच्चाहरूले बोतलको निप्पललाई ज्वलन्त भेट्टाउन सक्छन् र कप, चम्चा, वा सिरिंज खानपान गर्दा घाउहरू निको हुने बखत राम्रोसँग गर्न सक्दछन्।
कसरी हात, खुट्टा, र मुख रोक्न
एक पटक HFMD भएकोले तपाईंलाई यसको लागि प्रतिरक्षा बनाउँदैन again यसलाई बारम्बार सम्भव हुन्छ।
किनभने HFMD श्वासप्रश्वासको मार्गबाट ​​फैलिएको छ (खोक्राबाट टिप्सहरू, कुराकानी, छींकना, आदि वस्तुहरू वा अन्य व्यक्तिहरूमा ल्याइन्छ र उक्त व्यक्तिको आँखा, नाक, वा मुखमा हस्तान्तरण गरिन्छ), र मल-मौखिक मार्ग मार्फत (संक्रमित व्यक्तिको पोप) अन्य व्यक्तिले छुने वस्तुहरूमा जान्छ र त्यसपछि उनीहरूको आँखा, नाक, वा मुखमा छुन्छ), राम्रो स्वच्छता नै एचएफएमडीको फैलावट र पुनः संक्रमण रोक्नको लागि उत्तम तरिका हो।
खोकी र स्निज कभर गर्नुहोस्, र बच्चाहरूलाई कसरी त्यसो गर्ने सिकाउनुहोस्।
कम्तिमा २० सेकेन्डको लागि साबुन र पानीले पटक पटक हात धुनु — विशेष गरी टिशु प्रयोग गरेपछि, वाशरूम प्रयोग गर्दा वा डायपर परिवर्तन गरेपछि।
खेलौनाहरू नियमित रूपमा सफा गर्नुहोस् र सफा गर्नुहोस्, विशेष गरी जो लारको सम्पर्कमा आए।
खाना, पेय पदार्थ, टूथब्रश, तौंली वा मुखबाट सम्पर्कमा आउने कुनै पनि कुरा साझा नगर्नुहोस्, विशेष गरी कसैसँग जसलाई हालसालै HFMD छ वा छ।
नियमित तवरले सफा र प्राय: छुने सतहहरूको कीटाणुशोधन गर्नुहोस्।
यदि घरमा कुनै व्यक्तिको HFMD छ भने, उनीहरूलाई सकेसम्म अरु बच्चाहरूसँग घनिष्ठ सम्पर्कबाट टाढा राख्नुहोस् kiss चुम्बनलाई निरुत्साहित गर्दै, अँगालो हालेर, कप वा भाँडा जस्ता व्यक्तिगत चीजहरू साझेदारी गर्ने, छुट्टै कोठामा सुत्ने - संक्रमित व्यक्तिको पूर्ण सुधार नभएसम्म ।
यदि बच्चा उपस्थित हुन्छ स्कूल , डेकेयर, वा कुनै पनि स्थान जहाँ तिनीहरू अन्य बच्चाहरूसँग सम्पर्कमा छन् र तिनीहरू HFMD सम्झौता गर्दछन्, सँधै सुपरवाइजरलाई सूचित गर्नुहोस् ताकि तिनीहरूले अन्य अभिभावकहरूलाई उनीहरूको बच्चाको पर्दाफास भएको थाहा दिन सक्छन्।
हात, खुट्टा, र मुख रोग रमाईलो छैन, र यो राम्रो छैन — तर यो सामान्यतया हल्का हुन्छ र आफ्नै समाधान गर्दछ।
Supp पूरकहरू जुन मुटुको स्वास्थ्यको लागि राम्रो हो - र things चीजहरू बेवास्ता गर्न
कति पटक तपाइँ tylenol र ibuprofen वैकल्पिक गर्न सक्नुहुन्छ
यदि म गर्भवती छु भने मँ मतली को लागी के लिन सक्छु?
तपाइँ नि: शुल्क मधुमेह आपूर्ति कसरी पाउनुहुन्छ?
एक मानिसले कति d3 लिनु पर्छ?